को’रोनाले जुम्ल्याहा दाजुभाइको एकैपटक मृ त्यु, साथमा जन्मिए, साथमा बाँचे र साथमै म’ रे – Dainik Samchar
को’रोनाले जुम्ल्याहा दाजुभाइको एकैपटक मृ त्यु, साथमा जन्मिए, साथमा बाँचे र साथमै म’ रे
May 19, 2021 224
काठमाडौं। कोरोनाभाइरस महामारीले कैयौं परिवारलाई निकै गहिरो घाउ दिएर गएको छ । ती घाउहरुमध्ये कतिपय यस्ता छन् जुन घाउ परिवारले कैयौं वर्षसम्म बिर्सन सक्ने छैनन् ।
एकैपटक जन्मिएर २४ वर्षसम्म सँगसँगै बाँचेका दुई दाजुभाइको को’रोनाभाइर’सका कारण एकसाथ मृ’त्यु भएको दर्दनाक घ’टना सार्वजनिक भएको छ । भा’xरतीय दैनिक अखबार अमर उजालाका अनुसार घ’टना उत्तर प्रदेशको मेरठको हो ।
यी जादुभाइ दुवै इन्जिनियर थिए । उनीहरु दुवै कोरो’नाभाइर’सबाट संक्र’मित भए र उनीहरुको उपचारको क्रममा एकसाथ मृत्यु भयो । उनहिरुका आफन्त र परिचितहरुका अनुसार यी दाजुभाइ धेरैजसो समय साथमै रहन्थे । यी जुम्ल्याहा दाजुभाइका पिता मेरठको थोमस स्कुलमा शिक्षक छन् ।
यी दाजुभाइ संक्र’मित भएपछि करिब २० घण्टा जीवनको लागि संघर्ष गरेका बताइएको छ । जानकारी अनुसार यी दाजुभाइ साथमै इन्जिनियर बनेका थिए ।
गएको २३ अप्रिलमा मात्र यी दाजुभाइले २४ औं जन्मदिन मनाएका थिए । मेरठको छाउनीका ग्रेगरी रेमन्ड राफेलका दुई छोराहरुको नाम जोफ्रेड र राल्फ्रेड थियो । जन्मदिनको ठिक १ दिन पहिले उनीहरु को’रोना संक्र’मित भएका थिए । उनका पिता ग्रेगरीका अनुसार दुई छोराहरुको मृ’त्युपछि अब परिवारमा ३ जना मात्रै बाँकी छन् र परिवार क्षत विक्षत भएको छ । पिताका अनुसार दुई छोराको जन्ममा केवल ३ मिनेट फरक थियो ।
Prevमलाई माफ छोरी : तिमी बाबा आउनु भन्दै रोइरहेकी थियौ तर म आउनै सकिनँ’
Nextकुखुराको मूल्य प्रतिकिलो ११० मा झर्याे, मारमा किसान !
किशोरी हत्या आरोपमा एक वर्षपछि किशोर पक्राउ
आमाछोरीको अन्तिम भिडियो ! मन दरो गरेर हेर्नुस रु’दा रु’दै अन्तर्वार्तामै सम्हाल्न गार्हो(भिडियो)